Intengiso yempembelelo: Imbali, i-Evolution, kunye neKamva | Martech Zone
Abaphembeleli bemithombo yeendaba kwezentlalo: yinto yokwenene leyo? Ukusukela ukuba imithombo yeendaba zentlalo ibe yeyona ndlela ikhethwayo yokunxibelelana nabantu abaninzi ngo-2004, uninzi lwethu alunakucinga ngobomi bethu ngaphandle kwalo. Inye into yokuba imithombo yeendaba zentlalo itshintshile ukuba ingcono kukuba idemokrasi ukuba ngubani odumileyo, okanye ubuncinci owaziwayo.
Kude kube kutshanje, kuye kwafuneka sixhomekeke kwimiboniso bhanyabhanya, kwiimagazini, nakwiinkqubo zikamabonwakude ukusixelela ukuba ngubani odumileyo. Ngoku abantu banokusebenzisa imidiya yoluntu ukuba baziwe kakuhle kwicandelo labo lomdla. Ukuba ufuna ukuba intanethi edumileyo kwizifundo zokuthambisa, kukho uluntu lwalo!
Oku kukwathetha ukuba abantu ngoku banokwenza imali ngokusebenzisa imidiya yoluntu. Unokwakha oku kulandelayo ekuhlaleni, yaziwa kakuhle kwisiseko sakho solwazi kuluntu ekuthethwa ngalo, kwaye emva koko uvule amathuba aphuma kwizikhundla ezinefuthe.
Le ndlela yokuphila ayinayo ngaphandle kwemigaqo, nangona kunjalo, iyimveliso entsha kraca. I-FCC ifuna ukuqinisekisa ukuba abantu bayazi ukuba bajonge intengiso, yiyo loo nto uhlala ubona Okuxhaswayo Ukutshiza kwizithuba zebhlog okanye #ad kwisithuba se-Instagram.
Nangona kunjalo, abantu bathambekele ekufumaneni iimpembelelo zosasazo lwentlalo zithembeke ngakumbi kunesithethi sabasaziwayo abahlawulwayo- iipesenti ezingama-70 zolutsha zithi iiYoutubers zithandeka kakhulu kunabantu abadumileyo, ngelixa i-88% yabantu ithembela kwizindululo ezikwi-Intanethi njengaleyo bayifumana kusapho nakwizihlobo.
Ukucaphula uSeth Godin, Abantu banako "ukujoja i-ajenda yenkokeli". Oku akukaze kube yinyani ngakumbi xa kufikwa kwintengiso yempembelelo. Ukugcina abalandeli abathembekileyo, kufuneka uthande kwaye ukholelwe kwinto oyivumayo. UMari Smith ucatshulwe nguJohn White, Ukunyuka kwabaPhembeleli abanjengoLilly Singh kunye noAndrew Bachelor bakuphazamise njani ukuthengisa
Funda kabanzi malunga Uguquko lwempembelelo ukusuka kule infographic!
tags: ummeliAbathunywa begamaUkuvunywa kosaziwayoUguquko lwempembelelonefutheukuthengisa okunempembelelokwi-infographicIimpembelelo zosasazo lwentlaloUmxholo oxhasiweyoiimpembelelo kwi-youtube
UBrian Wallace ngumongameli Ukujonga ngoku, ishishini elikhokela iarhente yoyilo lwe-infographic eseLouisville, eKy. kwaye isebenza neenkampani ezisusela kumashishini amancinci ukuya kwiFortune 500. UBrian ukwasebenza umcimbi wasekhaya ukwenza iLouisville isixeko esikhuphisana ngakumbi (#ukucinga) Kwaye kwathiwa igama nguMcebisi kuShishini oMncinci kuGoogle ka-2017.